China Glass Panel Touch Wall Light Switch Socket Outlet ထုတ်လုပ်သူများ - Zhechi Electric
လျှော့စျေး Glass Panel Touch Wall Light Switch Socket Outlet ကို China ပေးသွင်းသူများထံမှ ဝယ်ယူပါ။
Home Smart Wall Outlet Socket အတွက် ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်
Glass Panel Touch Wall Light Switch Socket Outlet အတွက် အင်္ဂါရပ်များ
1. အရည်အသွေးမြင့် tempered glass pannel ဒီဇိုင်း၊ ဘယ်သောအခါမှ မညှိုးနွမ်းပါ။
2.အပြာနှင့်အနီရောင် LED အချက်ပြနှင့်အတူ, အလွန်ထူးခြားသည်။
3. တပ်ဆင်ရန် အရှေ့၊ ခလုတ်အဟောင်းကို တိုက်ရိုက်အစားထိုးပါ။
4.Power metering လုပ်ဆောင်ချက်။
5.socket အခြေအနေကိုစစ်ဆေးပြီး နောက်ဆုံးအခြေအနေကို မှတ်သားပါ။
6. Amazon Alexa နှင့် Google home စသည်တို့ကို ပံ့ပိုးပါ။
အမျိုးအစား-AU Glass Panel Touch Wall Light Switch Socket Outlet
Glass Panel Touch Wall Light Switch Socket Outlet ၏ Specification
အရောင် : အဖြူ / အနက်
အဝင်ဗို့အား-AC 110V-240V 50/60Hz
ပစ္စည်း : Crystal tempered glass ၊ fireproof V0 plastic box ၊
Wi-Fi ကြိမ်နှုန်း- 2.4GHz 802.11b/g/n
hot Tags:: Glass Panel Touch Wall Light Switch Socket Outlet၊ တရုတ်၊ စျေးပေါ၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးရောင်းချမှု၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စတော့တွင်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်